Dib u eegista Isbaanishka ee Onda V919 AIR DualOS | Androidsis
Waxaan ku sii wadaynaa falanqaynta boosteejooyinka Android, kiiskan oo leh a kiniin dareen leh Android iyo Windows 10, taasi waa DualOS, oo noqon karta mid ka mid ah hadiyadaha xiddigaha ee ciidahan Kirismaska ​​iyada oo ay ugu wacan tahay naqshaddeeda soo jiidashada leh ee ay dhiirrigelisay kuwa cusub iPad AIR iyo qaar ka mid ah qeexitaannada farsamo ee xiisaha leh qiimaha waallida dhabta ah.
Kiniiniga laga hadlayo waa kan Onda V919 AIR DualOS in aan ka heli karno laba nooc oo kala duwan sida ku xusan xusuusta keydkooda. Marka waxaan ka heli karnaa nooc ka mid ah 32 GB oo keyd gudaha ah oo kaliya 123 Euros iyo moodal labaad oo laba jibbaaran keydinta gudaha, taasi waa 64 Gb oo aan ku iibsan karno kaliya 140 Euro. Kiniiniyada qaar ee hoosta ku yaal waxaan kuu sheegi doonaa faahfaahinta oo dhan, kuwa wanaagsan iyo kuwa aan fiicnaynba.
1 Faahfaahinta kiniinka Onda V919 AIR DualOS
2 Kuwa ugu fiican kiniinka Onda V919 AIR DualOS
3 Kuwa ugu xun kiniinka Onda V919 AIR DualOS
Faahfaahinta kiniinka Onda V919 AIR DualOS
Tusaale V919 AIR DualOS
Nidaamka hawlgalka Android 4.4 + Windows 10 labadaba asal ah iyo kuwo la cusbooneysiin karo
Screen 9'7 "Muuqaalka kore ee muuqaalka leh QXGA resolution 2048 x 1536 pixels
Gacaliye Teknolojiyada Intel Z3735F 64 jajab iyo Quad core at 1 Ghz
GPU Intel HD Graphics 7aad gen
RAM 2 Qaan LDDR3
Kaydinta gudaha 32/64 Gb oo leh booska MicroSD illaa 128 Gb
Kaamirada hore 2 mpx
Xuduudaha kala duwan Wifi - Bluetooth 4.0 - OTG - HDMI
Tilmaamo kale Birtu waxay ku dhammaataa jirka unibody
Batariga 7200 mAh lithium polymer
Cabbirada X x 239 169 8 mm
Peso Gram 450
Qiimaha 123 Euros 32 Gb qaab ah y 140 euro 64 Gb qaabka gudaha ah oo lagu keydiyo
Kuwa ugu fiican kiniinka Onda V919 AIR DualOS
Shaki la’aan kan ugu fiican kaniinigan Onda V919 AIR DualOS, marka laga reebo qiimaheeda foosha xun ee aan laga adkaan karin inta u dhexeysa, waxaan ka heli karnaa qiimaheeda dhammeystiran macdan taasi waxay inbadan ina xasuusinaysaa qaabeynta Apple iPad AIR iyo sidoo kale shaashadeeda IPS-ta oo aad u fiican oo leh teknolojiyada muuqaalka retina iyo xallinta QXGA oo na siisa heer dhalaal iyo tayo taabasho oo runtii mudan in la muujiyo isla markaana la mid ah kiniinnada dhamaadka-sare leh.
Dhinaca kale, qeexitaankiisa farsamo guud ahaan 1,83 Ghz quad-core Intel ayaa saxeexay processor xawaaraha saacadda ugu badnaan, oo ay weheliso in ka badan in ku filan 2 Gb oo xasuusta RAM ah iyo suurtagalnimada isbeddel ku yimaada sida aan u baahanno inta u dhexeysa Android iyo Windows 10, Ka dhig terminaalka mid ka badan intii lagu taliyay labadaba la shaqeynta iyo waqtiyadayada firaaqada iyo baashaalka.
Waxyaabaha kale ee ay tahay inaan iftiimino oo aynaan joojin karin ka hadalkiisa, waa isaga batari weyn oo ku dhex jira wax aan badnayn iyo wax aan ka yarayn 7200 Mah kaas oo hubiya ismaamul qiyaastii ah 11/12 saacadood oo shaashad ah.
Intaa waxaa dheer, dabeecad ku jirta wanaaggeeda iyo in aan illoobi karno inaan sheegno, waa taas Onda ayaa horeyba u xaqiijisay in kiniinkan xiisaha leh uu heli doono cusbooneysiinta rasmiga ah ee Android 5.1 Lollipop waqti yar iyo sidoo kale, oo aad haysato Windows 10 sharci ah oo buuxa, waxaad helaysaa casriyeyn rasmi ah oo Windows ah si joogto ah.
Jadwalka Xasaasiga ah
Muuqaalka IPS QXGA Retina
Afyare kaarka MicroSD
Batariga weyn ee 7200 Mah
Kuwa ugu xun kiniinka Onda V919 AIR DualOS
Waxa ugu xun ee aan shaki ku jirin kiniinkan weyn ee 'DualOS' ah, waxaan ka helaynaa kamaradaha laga dhex helo lousy, labadaba oo keliya 2 xalinta xalinta iyo inay noogu adeegi doonaan oo keliya wicitaanada fiidiyowga iyo shirarka fiidiyaha sida kamarad webka ah.
Ugu dambeyntii, ka faallo in inkasta oo aanaan u iftiimin karin inay tahay wax xun, gaar ahaan laga soo shaqeeyay Windows 10 ama marka Onda ay cusbooneysiineyso cusbooneysiinta Android 5.1, muuji taas nooca 32GB ee keydinta gudaha ayaa gaabinaysa marka la eego xusuusta kaydinta gudaha, si aad u badan si loo rakibo cusbooneysiinta rasmiga ah ee Windows 10, waxaan u baahan doonnaa MicroSD la geliyay si loogu isticmaalo keyd ahaan si loo taageero nidaamka qalliinka. Taasi waa sababta dhowr jeer aan kugula talinayaa fiidiyowga ku lifaaqan in haddii aad iibsaneyso mid ka mid ah kiniiniyaddan, kaliya 20 Euros ka badan, waxaad helaysaa nooca 64 Gb.
32 Qaab yar oo yar
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Onda V919 AIR DualOS, waxaan falanqeyneynaa kiniin DualOS ah oo xoog leh qiimo qosol leh
Oo muxuu kafiican yahay kan ONda ama Teclast u dhigma ???
Teclast-ka aad sheegaysid anigu iskuma dayin, sidaa darteed kama faaloon karo, inkasta oo haddii aan kuu sheego in Kiniinkani yahay mid la yaab leh.
Juan Diego Romero Gonzalez sawir-haye dijo
Halka laga iibsan karo.
Jawaab Juan Juan Romero Gonzalez
Habka 64 Gb http://goo.gl/WBpV9p
32 moodooyinka Gb http://goo.gl/D2Pu5q
Waxaan akhriyay dad iyaga gaadhay iyaga oo aan Google Play lahayn. Midka aad ka iibsan karto xiriiriyeyaasha aad gelisay keen?
Subax wanaagsan ayaan maanta helay kaniiniga oo aan ku tijaabinayo qalabka wax lagu iibiyo ee android ka oo aan waxba qabanayn waana inaan markale dib u bilaabaa, waxa kaliya ee aan qabtay ayaa ah inaan rakibo google play oo la rakibay laakiin aan shaqaynayn, ma ogi inay taasi kugu dhacday adiga iyo maxaa waajib ah in la sameeyo.
Ku jawaab antonio vega
Ma sheegi kartaa goleyaasha aad soo gashay si aad u ogaato goorta cusboonaysiinta Android 5.1 ay timaaddo iyo halka laga raadsado casharrada si loo sameeyo windows windows image disk? Waan iibsaday imikana waa wax weyn, waxa kaliya ee xun ayaa ah in aanan heli karin dabool / kumbuyuutar aan fiicnayn
Pablo isla bogga Onda-Tablet.com Waxaan ka helay dabool leh kumbuyuutar loogu talagalay V919 Airduos-kayga oo ah 24 doolar.
Jawaab Luis Miguel Hervas
Luis waxaan ku arkay kan bogga laakiin waxaan raadinayay mid la mid ah kan sawirka ku jira, kumbuyuutar leh trackpad una xiro sida laptop-ka. Waan u qoray iyaga waxayna ii sheegeen inaysan iyagu haysan, inay tahay kaliya sawirka.
Ma siinayo laba iyo toban saacadood oo shaashad ah ama kaftan ah, waxay i siisay 5 saac iyo badh, si fudud ayey u kululaataa, mitirka batteriguna si dhib yar ayuu u dhacayaa intaad isticmaaleyso, markaa haddii markii aad mar kale isticmaasho laga yaabaa inaad aragto inay wuxuu cunay 3-5 ama 8% (waxaan qiyaasayaa inay tahay waxa ay ahayd inay hoos u dhigto inta la isticmaalayay, laakiin xoogaa dhib ma leh). Daaqadaha waxaad moodaa inay runta sifiican usocoto. Naxdinta ku saabsan android madaama kiniinka laftiisa uu leeyahay naqshad wanaagsan iyo dhammeyn wanaagsan, laakiin arrinta bateriga iyo kululaynta ......
Waxaan ku guuleystey inaan ku bilaabo Android anigoo badalaya badhanka awooda iyo mugga isla waqtigaas. Ma jirtaa waddo looga gudbo hal nidaam oo loo maro mid kale oo fudud? Cusboonaysiinta ma otomaatigbaa?
Waa salaaman tahay, waxaan iibsaday onda v919 Air CH 64gb iyo 4 Ram laakiin batteriga ayaa sii yaraanaya, ma caadibaa mise waa ku xun yahay guriga ???
Ku soo jawaab POIR
Waxay yiraahdeen in kaniini uu waqtigiisii ​​dhacay waqtigiisii ​​dambe ma aysan soo saarin kaniiniga hadana ma jiraan wax taageero farsamo ah
Samsung Galaxy S7 oo leh shaashad cadaadis xasaasi ah, USB Type-C iyo kaarka microSD
Laga soo bilaabo cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Android 6.0.1 illaa bilowga OS (Video)